Madaxda Hirshabeele oo dib ugu laabanaysa Jowhar iyo golihii wasiirada oo la magacaabayo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxda Hirshabeele oo dib ugu laabanaysa Jowhar iyo golihii wasiirada oo la magacaabayo
Madaxda maamulka Hirshabeele oo muddooyinkii ugu dambeysay ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa dib ugu noqonaya xarunta maamulkaasi ee ku taalla magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble, ku-xigeenkiisa Cali Guudlaawe, guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa koowaad ayaa dhamaantood muddo labo bilood ah magaalada Muqdisho ugu sugnaa doorashadii madaxweyne ee halkaasi ka socotay awgeed.
Dhammaan madaxdaasi ayaa haatan laga sugayaa inay dib uga shaqo bilaabaan xaruntooda ku taalla magaalada Jowhar, iyadoo howsha ugu horeeysa ee hortaala madaxdaasi ay tahay magacaabida golaha wasiirada maamulka Hirshabeele.
Sidoo kael, la-tashiyada magacaabidda golaha wasiirada maamulka Hirshabeele oo hore u bilawday ayaa laga cabsi qabaa inay waqti badan qaadato, iyadoo horeba muddo seddax bilood ah ay hore dib u dhacday.
Ugu dambeyntii, xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabeele ayaa sheegay inay haatan wadaan mooshin ka dhan ah madaxweynaha maamulkaasi Cali C/laahi Cosoble, oo ay ku eedeeyeen waxqabad la’aan iyo inuusan ku shaqeyn xarunta maamulkiisa ee Jowhar.